Daawo Sawirada: Shirkada Som Meat oo u Debaal degtay sanad guuradii 22-aad ee kasoo wareegtay aas aaskeeda - iftineducation.com
Daawo Sawirada: Shirkada Som Meat oo u Debaal degtay sanad guuradii 22-aad ee kasoo wareegtay aas aaskeeda
aadan21 / January 21, 2017
iftineducation.com – Shirkadda hilibka dhoofisa ee Soomaali Meat ayaa shalay u dabaal degtay sanadguuradii 22-aad ee kasoo wareegtay aas aaskeeda ama markii ay bilawday hawlaheeda dhoofinta hilibka.
Waxaana munaasabad loogu dabaal degayay sanad guuradii 22-aad ee kasoo wareegtay markii shirkada la aas aasay lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana Munaasabada kasoo qeyb galay Saamileyda Shirkada Someat, shaqaalaha shirkada iyo marti sharaf lagu casuumay .
Waxaa looga sheekeeyay munaasabada marxaladihii kala gedisnaa ay soo martay shirkadda Someat intii ay sheqeyneysay iyo horumaradii ay ku talaabsatay 22-kii sano ee Shirkadaasi howlaheeda shaqo waday.
Gudomiyaha Golaha boardka Shirakada Som Meat Shiikh Abdi Saciid ayaa goobta ka sheegay in ay shirkaddu 6 bil kadib albaabada u furi doonto kawaankii ugu weynaa bariga Africa kaasi oo lagu qalayo nuuc kasta xoolaha sida ariga, Geela iyo Lo’da.
Mareeyaha shirkadda mudane Shafici Ahmed oo munaasabada ka hadlay ayaa dhankiisa ammaan iyo bogaadin u jeediyay shaqaalaha shirkadda, kuwaas uu sheegey in la’aantood aysan shirkaddu gaari la’hayn heerka ay maanta taagan tahay.
Sidoo kale waxa meesha ka hadlay qaar kamid ah saamileyda shirkadda Som Meat iyo marti sharaf kala duwan, waxa ayna dhamaan ka sheekeeyeen horumarka ay gaartay shirkada Som meat iyo halka ay hada tiigsaneyso.
Ugu dambeyn waxaa munaasabada la gudoonsiiyay qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda Som Meat gaar ahaan kuwii ugu firfircoonaa shahaadooyin sharaf iyo abaalmarin lagu dhiiragelinayo shaqooyinkii ay qabteen.
#Ajakis Kulahaa Nin Madow Oo Malakal Mowd U Eg Aa Ixiray Wa Fuuray Wlh kkkkk daawo
War Deg Deg Ah : Dab xoogan oo Goordhaw ka kacay Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho